Spotify tan iyo markii la bilaabay sanadkii 2008 ayaa guul weyn. Iyadoo adeegyada jira ee par la keentay codsiyada geeyo music sida Pandora iyo Grooveshark, taas madal music digital soo guuxayay si tartiib ah. Iyadoo Spotify Waxaad dhegaysan kartaa bilaash ah music on click ah, abaabulo ama u maamuli lahayd playlists oo iyaga ku raaxaysan ee firaaqada. Interface waa mid saaxiibtinimo in aadan dareemi doontaa wax caqabado in ay dhex maraan codsiga iyo si aad u kari aad la joogo. Iyada oo update dhawaan, sameeysa ayaa qaaday weli ku boodda oo kale oo heer sare ah iyo boosteejo ah sameynta ma ahan oo keliya engine music-hoorto, laakiin, wax badan oo ka sii badan.
Halkan waa war wanaagsan u isticmaala Spotify. Horumarka Spotify ee la imanaysa marka la update waxay ahaayeen lama filaan ah
Horumarinta ayaa qaaday Spotify ka kaliya music in an oo dhan qaybta madadaalada la update cusub. Hadda marka laga reebo dhagaysto kuwan raadkaygay music ka fanaaniinta iyo album, aad ku raaxaysato yaabaa geeyo video iyo wararka cusub. Ma aha oo kaliya in, ka 'NOW' u hagaagsan lahaa music si ay niyadda aad.
Qaybta 1.Benefits ka update Spotify ee
Update xal Qaybta 2.Spotify
Qaybta 3.Spotify dhibaatooyin update iyo qoraalada
1.Benefits ka update Spotify ah
1. updates geeyo iyo news Video
Iyada oo update ugu dambeeyey, haatan waxaad noqon doontaa si aad u daawato views oo muujinaya in qalabka aad, raac channels heshiiska iyo iyaga offline daawato marka aad u baahan tahay awood. Marka lagu eedeeyey hoos u xidhid account Premium ee 10 $ beddeli kartaa habka uu madadaalada ayaa ilaa iyo haatan. Video cunaa ka channels sida Comedy dhexe, ESPN, NBC, Amazon iyo Netflix loogu raaxaysan karaa tayada HD. Sidoo kale waxaad ku raaxaysan karaan si joogto ah warka feed in ay la xiriiri adduunka oo la ogaado waxa ka dhacaya in industry madadaalada.
Tani waxaa dheer in Spotify soo saarey fikrad la mid ah kaas oo ah "Xukunka" by music Beats ka shaqeeya.
The "Hadda 'bilowga lahayd playlists ku salaysan niyadda. User ayaa dhici karta dooro niyadda ama seenyada iyo tan dhalin lahaa playlist caado. Updates Liiska bixinta talooyinka si joogto ah si uu ugu haboonaado niyadda isticmaalaha.
Codsiga waa design si ay u bartaan Dooratay user, la socdaan nidaamyo iyo sidaas nafteeda astaysto sida si loo bixiyo adeeg fiican. Tani waxay kaa caawin lahaa software-ka si ay u bartaan oo ku saabsan dhadhanka iyo qaybta oo xiiso leh iyo sidaas ku talinaynaa waxa aad u haboon macneeyeen. Taasoo keentay app noqon lahaa saaxiibkiisii ​​ka wanaagsan in user iyo la qabsashada ay ku keeni lahayd dhexgalka fiican u dhexeeya aadanaha iyo interface ka.
3. Spotify orodka
Tani waa muuqaal dhif iyo naadir ah ugu boosteejo ah oo sida Spotify. Kani waxa uu isticmaalaa ugu dareemayaal qalab aad ku sii socdaan dhaqdhqaaqiinna marka aad jimicsi ka dibna u hagaagsan iyo abaabulo kuwan raadkaygay music, isbedel Isbadalo of music ee laxanka aad xawaaraha hagaajinaysa aad niyadda iyo keenaya rush adrenaline, hagaajinaysa aad madaale. Tani waa saaxiibka ugu fiican ee aad ororodid iyo jadwalka jimicsi.
Spotify ayaa sidoo kale ku dhawaaqay update ah u version desktop-ka. Codsiga waxaa la shaqeeya doona Musixmatch ah. Tani waxay ka dhigi lahaa lyrics qayb joogtada ah ee codsiga desktop-ka. Hadda waxaad ku raaxaysan yaabaa lyrics music iyo heesta kula qaado si aad u hesho sida ugu fiican ee waayo-aragnimo dhagaysiga muusigga ah.
Interface wuxuu yeelan doonaa button lyrics ah, taas oo marka riixi lahaa lightup xiiso leh. Sidoo kale waxaad isticmaali kartaa oo baadhaan lyrics ka database la isticmaalayo Baadh feature. Musixmatch ayaa loogu codeeyay mid ah lyrics codsiga ugu wanaagsan ee la malaayiin lyrics isla laga heli karaa go ka. Haddaba markii labadan curiyay weyn u wada shaqayn lahaa, aad rabin karaa in ka yar ama ku guuldareystaan ​​inay ku raaxaystaan ​​aad music.
Qeybta saaxiibo hagaagtay waa lama filaan ah, oo kaliya hoos u ogaato oo ku saabsan saaxiibo aad ugu jeceshahay. Waxaad raaci kartaa waxa ay raacaan, si ay u dhagaystaan ​​ay playlist iyo wax ka badan.
Update xal 2.Spotify
• Wixii PC iyo Mac users
By default, updates ugu heli rakibay si toos ah qalabka. Haddii aad naafo this ciyaaray ama waxa la xadiday by goob qalab aad ka dibna waxa aan dhici doona si toos ah.
Haddii ay sidaa tahay, waxaad heli lahaa wargelin ah ee lagu update gareeyo cusub oo doorasho ah si loo soo dajiyo file cusub oo feature. Haddii wargelinta pop-up tani ma muujiyaan, si fudud u tagaan si ay ugu menu 'gargaar' ka dibna 'About Spotify'. Farriin ama ogeysiinta waxaa jiri lahaa (ku xiran qalabka). Riix Waxyiga, waxayna lagugu hagi lahaa xiriirka download (for desktops),
• Wixii macruufka iyo Andoird user
Fur PlayStore, (waayo, Andriod) ama Store Apple, (waayo, dadka isticmaala macruufka). Tag ay barnaamijyadooda liiska lagu rakibay interface ka. Haddii ay jirto wax update ee software-ka, link Spotify ee kala saaraa lahaa in hoosaadka Update ah. Fur Link dooro update, updates la rakibi doonaa si qalab aad.
3. update dhibaatooyin Spotify iyo qoraalada
Arrimaha qaarkood ayaa la soo sheegay la update cusub, qaar ka mid ah arrimaha ugu badan waxaa ka mid
1.Now aadan dooran kartaa meesha ay ku kaydiso offline playlist ah
2. Spotify kama muuqato in guddi gaadhsiin qalabka.
3. jiita iyo Hadda hoos u feature, halkaas oo aad ka jiitami karto kuwan raadkaygay music ka aad PC in playlist si toos ah, uma shaqeeyo. Waxaad u baahan tahay inaad ku darto gacanta track kasta ka 'kuwan raadkaygay deegaanka liiska'.
4. Qaar badan oo dadka isticmaala aaladaha kala duwan (daydo oo shirkadood oo kala duwan) ayaa sheegay daryaan joogtada ah ee codsiga.
> Resource > Spotify > Talooyin ku saabsan Spotify Update